laacib » SAWIRO: Philippe Coutinho & Roberto Firmino Oo Si Toos Ah U Bilawday Tababarka Liverpool Iyo Klopp Oo Dib U Helay Xidigihii Kulamada Caalamiga Ahaa Kaga Maqnaa.
SAWIRO: Philippe Coutinho & Roberto Firmino Oo Si Toos Ah U Bilawday Tababarka Liverpool Iyo Klopp Oo Dib U Helay Xidigihii Kulamada Caalamiga Ahaa Kaga Maqnaa.
Tababaraha laacibkii Liverpool ee Jurgen Klopp ayay farxad u ahayd in xidigaha ugu muhiimsan kooxdiisa ee kulamada caalamiga ah ku maqnaa in ay maanta si toos ah u bilawdeen tababarka marka laga reebo Sadio Mane oo uu dhaawac halis ahi ku soo gaadhay kulankii uu xulka qarankiisa Senegal guusha kaga soo gaadhay jasiirada Cape Verde Islands.
Xidigaha ree Brazil ee Philippe Coutinho iyo Roberto Firmino oo uu Klopp ka walwalsanaa in ay seegi karaan kulanka adag ee Manchester United kadib safar dheer oo ay ka soo galeen South America ayuu farxad ka helay kadib markii ay si toos ah u bilawdeen tababarkii maanta.
Waxayna tani la micno tahay in Klopp uu ka nasan doono walwalkii uu ka qabay xaalada taam ahaansho ee Firmino iyo Coutinho kuwaas oo kulamadii Brazil ee isreeb reebka koobka aduunka soo ciyaaray. Coutinho ayaa ka mid ahaa xidigihii bandhiga cajiibka ah ka sameeyay kulankii Brazil ay 3-0 ku garaacday Chile laakiin safar dheer kadib waxay xarunta Melwood soo gaadheen iyaga oo ku jira xaalad fiican.
Mohamed Salah isna xulka qarankiisa Masar guul taariikhi ah ku soo hogaamiyay isla markaana lugtiisa ugu soo saaray koobka aduunka ayaa xarunta Melwood si buuxda maaanta ugu shaqaynaya isaga oo fariin digniin ah u diray Jose Mourinho iyo kooxdiisa Red Devils.
Mohamed Salah oo ka hadlayay kulanka Man United ayaa yidhi: “Sabtida waa kulan wayn, qof kasta oo aduunka jooga ayaa ciyaartan daawan doona, anaga kulan wayn ayay noo tahay sababtoo ah waxaa waajib nagu ah in aanu u dagaalano hurumarinta natiijadayada, waxaan rajaynayaa in aanu guusha heli doono”.
Mohamed Salah ayaa hadalkiisa si raaciyay: Anagu markasta waxaanu u dagaalanaa kulankasta, laakiin kani waa kulan wayn wuxuuna anaga noo samayn karaa farqi. Waxaa waajib nagu ah in aanu horumarino kaalinta aanu miiska kala saraynta kaga jirno, waa in aanu dagaalano oo aan isku dayno in aanu ciyaarta guulaysano”.
Xidigaha ree England ee Jordan Henderson, Chemberlain, Solanke, Daniel Sturridge, Danny Ings iyo Joe Gomez ayaa dhamaantood qayb ka ahaa tababarkii maanta ee uu Klopp ku bixiyay Melwood. Si la mid ah Alberto Moreno iyo Joel Matip oo uu Klopp ka doonayo in ay shaqo adag qabtaan kulanka Red Devils.
Dejan Lovern, Emre Can, James Milner iyo ciyaartoy kale oo da’yar ah ayaa sidoo kale shaqadii maanta ee tababarka Liverpool ka soo muuqday laakiin Sidio Mane iyo Adam Lallana ayaa ka mid ahaa xidigaha Liverpool ka maqnaa isla markaana dhaawacyo ka soo kabsanaya.